ပန်ဒိုရာ: One Act Play
Posted by pandora at 12:10 AM
ကဗျာရဲ့ အတိအကျ ဆိုလိုရင်း အတိုင်း မိချင်မှတော့ မိမှာပေါ့လေ။
တို့တွေ.. တစ်နေ့ ခွဲခွာရဦးမယ်။
မလှောင်ကြေးဗျို့။ စမ်းကြည့်တာ။ အဟဲ။
ကဲလာပြီဗျာ။ တခါမှ ဘာမှမထားခဲ့ဘူးလို့ ခြေရာတော့မဟုတ် လက်ရာတော့ ထားခဲ့ဦးမှ။ နောင်မှာ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းထဲ စာလုံးတွေ မပါလောက်ဘူးထင်ပါရဲ့။ ခေါင်းစဉ်ပေးရင် မီးတပွင့်လို့ပေးလိုက်မယ်ဗျာ။ ဘာသာပြန်တယ်ဆိုရာမှာ ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ အဓိပါယ် ကိုက်ညီအောင် ကိုယ့်စိတ်ကူးရှိသလိုပေးခွင့်ရတယ်လို့ မှတ်သားမိဘူးရဲ့။ လာပြီဗျာ…
ဘယ်လိုလဲ။ အဆင်မပြေလည်း ပြေသလိုပေါ့။
မပန် ...ကြိုးစားကြည့်သွားတယ်ဗျ ...
ပန်ဒိုရာရေ ကျွန်တော့် ထုံးစံအတိုင်း ကဗျာမဟုတ် ဘာမဟုတ်ရေးထား တယ်။
အခုလို ဘာသာပြန်ကြတာတွေ တွေ့တော့ အနည်းဆုံး အကြောင်းရင်း ၃ မျိုးလောက်နဲ့ ၀မ်းသာရတယ်။
၁) ပန်ဒိုရာ ရေးထားတာလေး အရေးလုပ်ပြီး ဘာသာပြန်ကြည့်ကြလို့
၂) ဘလော့ဂါ မောင်နှမတွေကြား ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကို ခံစားရလို့
၃) လက်ရာတွေက တမျိုးစီ ကောင်းမွန်ပြီး ခေသူမဟုတ်တွေချည်းပဲဆိုတော့ အရည်အချင်းတွေကို ချီးကျုးစွာနဲ့ ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာမိတာ.
ဘာသာပြန်သူ ပုံရိပ်၊ ကိုအန်ဒီ၊ မိုးညို၊ ကိုမောင်ရင်၊ နေမိုး (ရှားပါးလက်ရာ)၊ ဂျစ်၊ ပီတိ တို့နဲ့ လာဖတ်ကြသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်လျှက်..
P.s. အစ်မရေ…ပြောင်းပြန်ရေးကြည့်လိုက်တာ….ကဗျာတော့မရေးတတ်ဘူး…အစ်မရဲ့ reply message လေးကိုသဘောကျလို့ကြိုးစားရေးကြည့်တာ…လာလည်တဲ့သူတွေကို အလုပ်ပေးလိုက်တဲ့idea လေးက so good….
အနော်သာ ပြန်လိုက်ရင်တော့ သေချာပြီ မူရင်းပါ ပျက်တော့မယ် ဟတ်ဟတ် သနားလို့ မရေးပေးတော့ဘူး။ ညှာလိုက်တော့မယ်.